Wednesday, 21 Jun, 2017 5:45 PM
यदि तपाई शनिवारको दिन शपिङ गर्नुहुन्छ, या खाद्यान्नको किनमेल गर्नुहुन्छ भने ख्याल गर्नुहोस् कतै तपाईले गरीरहेको किनमेलबाट शनि देवताको अपमान त भइरहेको छैन । शास्त्रमा केहि यस्ता चिजहरु उल्लेख गरीएको छ जसको शनिवार किनमेल गर्नु उत्तम मानिँदैन । बिशेषगरी बस्तु फलामको छ भने त्यसको किनमेल नगर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।
यस्ता छन् शनिवार किनमेल गर्न नहुने बस्तुहरु
१. फलामको किनमेल
फलामलाई शनिदेवको धातु मानिन्छ । शनिवारको दिन फलामको वस्तु शनिदेवलाइ दानगरेमा शनिदेव प्रशन्न हुने धार्मिक विश्वास छ । यदि यसको विपरीत तपाई फलामको किनमेल गर्नुहुन्छ भने तपाईको परिवारमा संकट आइपर्न सक्छ । तपाईलाई आर्थिक समस्या पर्नुको साथै काम बिग्रने समेत हुनुक्छ ।
२. नुन र तेलको किनमेल
शास्त्रअनुसार शनिवारको दिन नुन र तेलको किनमेल गर्नु उपयुक्त मानिँदैन । यसले ऋण लाग्ने तथा छालासम्बन्धि रोगको समस्या निम्त्याउँछ ।
३. कालो तिलको किनमेल
शास्त्रअनुसार शनिवारको दिन कालो तिलको किनमेल गर्नु हुँदैन । यसले परिवारमा विपत्ति निम्त्याउँछ ।
४. काला जुत्ताको किनमेल
शनिवारको दिन काला जुत्ताको किनमेल गर्नु नराम्रो मानिन्छ । यस दिनमा किनेको काला जुत्ता यदि तपाई कुनै बिशेष दिनमा लगाउनुहुन्छ भने तपाईको दिन नराम्रो हुन्छ र काममा बाधाहरु उत्पन्न हुन्छन् ।
५. कैंची र मसीको किनमेल
शनिवारको दिन कैंचीको किनमेल गर्नाले आफन्तजन तथा साथीभाईहरुमा मनमुटाव सिर्जना हुन्छ । मसीको किनमेल गर्नाले तपाईको जिवनमा मानहानी हुने वा अनावश्यक दोष लाग्ने हुनसक्छ । यसकारण शनिवारको दिन कलम वा मसी नकिन्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।